नेपालको समय: ०१:३९ | UK Time: 19:54
नेपथ्य टोली आज सांझ लन्डन उत्रंदै
लन्डन । अगष्ट ८ शनिवार ओ टु एकेडेमी ब्रिक्सटनमा कन्सर्ट गर्न नेपथ्य टोली आज सांझ ७ बजे लन्डन हिथ्रो उत्रंदै छ । नेपथ्य आवद्ध दशजनाको टोली काठमाण्डौंबाट उडिसकेको आयोजक इलाइट इभेन्ट्सका एलबीजेड गुरुङले जनाए ।...
एनआरएनए यूके चुनावी मैदानमा न्यौपाने पनि
लन्डन । एनआरएनए यूकेको सेप्टेम्बर दोश्रो साता हुने कार्यसमिति निर्वाचनमा साउथ इष्ट लन्डनका एकजना व्यवसायी ललित न्यौपानेले पनि उपाध्यक्ष लड्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो परिचय नखुलाइ पठाइएको एउटा विज्ञप्तिमा न्यौपानेले संस्था र अब...
साउथ इष्ट लण्डनमा नयाँ संस्थाकाे जन्म
लण्डन । साउथ ईस्ट लण्डनमा नयाँ सामाजिक संस्था गठन भएको छ । राेयल ग्रीनीच नेपलिज कम्युनिटी नाम दिइएकाे संस्था सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाइ समेट्न गठन गरिएको बताइएको छ । कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा...
एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्ष पदमा माष्टर राष्ट्र राईको दाबी
लण्डन । सगरमाथा तेक्वान्दाे स्कुलका खेलकुद प्रबन्धक, संस्थापक तथा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन )बेलायतका सल्लाहकार माष्टर राष्ट्र राईले एनआरएन बेलायतकोे आगामी १३ सेप्टेम्बरमा हुने छैंटौ अधिवेसनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका...
नेपलिज डक्टर्स एसाेसिएसनमा पहिलाेपटक महिला अध्यक्ष
लण्डन । नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसन (एनडिए) युकेको अध्यक्षमा डा. बिना थेबे निर्वाचित भएकी छिन् । एसोसिएसनको हालै युकेमा सम्पन्न साधारण सभाले डा. थेबेलाई अध्यक्षमा चुनेको हो । सन् १९८५ मा स्थापित एसोसिएसनमा निर्वाचित हुने डा....
दासु पाण्डेको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका सचिव दासु पाण्डेले आगामी सेप्टेम्बर १३ मा हुने निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पाण्डेले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका...
बेलायतमा यलम्बरहाङको सम्झनामा स्मृति दिवस
लन्डन । बेलायतमा किराँतहरुका प्रथम राजा यलम्बरहाङको सम्झनामा स्मृति दिवस मनाइएको छ । बेलायतको वकिङ शहर नजिकै किराँत राईहरुको आफ्नै भूमी ग्याम्बलस् लेन, रिप्ले अवस्थित माङखिम (पुजा घर) तथा साकेला स्थलमा स्मृति दिवस मनाइएको...
ग्रीनवीच कपको पांचौ संस्करणमा मङ्गोलियन भान्जालाई उपाधि
लन्डन । ०२ अगस्ट आइतबार ऊलवीचस्थित रोयल आर्टिलेरी ब्यारेकको फुटबल मैदानमा आयोजित ग्रीनवीच कप २०१५ प्रतियोगितामा मङ्गोलियन भान्जाले उपाधि जितेको छ । उक्त टिमले प्रथम स्थान सुरक्षित गरि नगद पुरस्कार १५ सय पाउण्ड, रनिङ...
प्रोफेसर सिम्खडाले सम्हाले एसोसिएट डिनको कार्यभार
लन्डन । बेलायतमा लामो समयदेखि प्राध्यापनमा संलग्न एकजना नेपालीले यहांको विश्वविद्यालयमा एसोसिएट डिन जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी शुरु गरेका छन् । बेलायतको लिभरपुलस्थित जोन मोर युनिभर्सिटीको एसोसिएट डिनमा हालै नियुक्त प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडाले अगस्ट...
गुल्मेलीको वार्षिक भेटघाट भब्य
लन्डन । गुल्मी जिल्ला समाज युकेले २ अगष्टमा आयोजना गरेको बार्षिक समर भेटघाट कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । लन्डन नजिकै मेड्स्टोनको न्यू लर्निङ्ग एकेडेमीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बेलायतको लन्डन, अल्डर्शट, रीडिङ्, चार्ल्टन, प्लम्स्टिड,...
सुखदुखमा साथ दिन एनअारएन युकेमा बुद्धिराम थापाकाे उम्मेदवारी
लण्डन । एनअारएन युकेकाे निर्वाचनकाे मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू पनि थपिँदै जान थालेका छन् । वर्तमान कार्य समिति सदस्य पूर्व गाेरखा सैनिक बुद्धिराम थापामगर पनि अध्यक्ष पदका लागि प्रत्याशीकाे हाेडमा थपिएका छन् । तनहुँ...
सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ सम्मानित
लन्डन । लन्डनका सक्रिय सञ्चारकर्मी कुशल श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् । गुल्मी जिल्ला समाज यूकेले आइतबार मेडस्टोन केन्टमा आयोजित आफ्नो वार्षिक भेलामा के के मुभिज् प्रोडक्शनका निर्देशक श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी...
« अघिल्ला 1 … 375 376 377 378 379 … 442 पछिल्ला »